Wargayska Caanka Ah Ee L’Equipe Oo Qiimayntiisii Looga Bartay Ku Karbaashay Xidigo PSG & Man United Ah Iyo Qiimaynta Labada Tababare La Siiyay – Latest Sports News
Wargayska Caanka Ah Ee L’Equipe Oo Qiimayntiisii Looga Bartay Ku Karbaashay Xidigo PSG & Man United Ah Iyo Qiimaynta Labada Tababare La Siiyay
Manchester United ayaa xalay daqiiqadihii ugu danbeeyay qalbi jabisay kooxda PSG oo markale ku fashilantay in ay heer fiican ka gaadho tartanka ay inkaartu ka haysato ee UEFA Champions League. PSG ayaa iska lumisay fursad wayn oo ay ugu soo bixi kartay siddeed dhamaadka UEFA Champions league kadib markii laba qalad oo xun ay sameeyeen qaybtii hore kuwaas oo Man United siiyay hogaaminta ciyaarta.
Romelu Lukaku ayaa PSG ku ciqaabay laba qalad oo ay difaaca iyo goolhaye Buffon sameeyeen waxayna taasi keentay in Man United ay hal gool u baahnayd dhamaadkii ciyaarta taas oo ugu danbayn ay ku heleen dhacdadii muuqaal caawiyaha garsoorka VAR uu rekoodhaha ugu abaal mariyay Red Devils.
Haddaba wargayska L’Equipe oo looga bartay qiimayn aan wax naxariis ah lahayn isla markaana lagu saleeyo qaab ciyaareedka ciyaartoy kasta iyo macalin kasta ee kulamada waa wayn ayaa karbaashay ciyaartoy badan oo PSG ka tirsan iyo waliba xidigo Man United u ciyaara.
L’Equipe ayaa qiimaynta ugu sareeya siiyay tababare Ole Gunnar Solskjaer waxayna ku qiimeeyeen tatikadii iyo qaabkii uu PSG uga cidhibtiray tartanka Champions league xili ay kooxdiisu halis ugu jirtay in ay tartankan ka hadho.
L’Equipe ayaa Ole Gunnar siiyay qiimayn dhan 9/10 taas oo ay adag tahay in laga helo qiimaynta wargayskan halka tababaraha PSG ee Thomas Tuchel uu helay qiimayn 3/10 oo kaliya ah.
Wargayska L’Equipe ayaa qiimaynta ugu liidata oo 2 darajo ah siiyay difaaca PSG ee Kehrer kaas oo sabab u ahaa goolkii furitaanka ee Man United wuxuuna helay qiimayn 2/10 kaliya ah waana qiimayn lagu bahdilay xidig bandhig liita sameeyay.
Waxaa sidoo kale qiimayn aad u liidata la siiyay Kimpembe oo ahaa xidigii rekoodhaha lagu ciqaabay ee PSG ka galaaftay koobka Champions league, waxayna qiimayn min 3 darajo oo kaliya ah wadaagaan Mbappe, Draxler, Dani Alves iyo Di Maria laakiin Buffon ayaa lagu bahdilay qiimayn 2 darajo oo kaliya ah.
Dhinaca Man United waxaa qiimaynta gabi ahaanba laga saaray Eric Bailly kaas oo aan wax saamayn ah yeelan isla markaana muddadii uu garoonka ku jiray ogaansho la’aan ahaa waxa kale oo qiimayn aad u hoosaysa helay Pereira, Fred, MctTominay laakiin Lukaku ayaa noqday xidiga guud ahaan ugu qiimaynta sareeyay dhamaan ciyaartoyda kooxaha Man United iyo PSG halka Rashford, Smalling iyo Lindelof yihiin xidigaha ugu soo qiimaynta xiga.
Halkan kaga bogo Qiimaynta wargayska L’Equipe ee kooxaha Man United iyo PSG:
Man United oo quus u muuqatay kadib guuldaradii Old Trafford ayaa markale sii xumaysay taariikhda madow ee ay PSG ku leedahay tartanka Champions league.